Clouded चितुवा - उष्ण कटिबन्धीय एक formidable predator
Clouded चितुवा नै प्रजाति होइन, त्यसैले यसलाई ठूलो र सानो बिरालोहरु बीच एक मध्यवर्ती स्थिति कब्जा कुन छुट्टै जीनस, मा छुट्टयाएर गर्न सकिन्छ। यो predator पहिलो र दोस्रो दुवै को विशेषताहरु छ। यो मात्र ठूलो बिरालोहरु purr सक्नुहुन्छ को एक - एक हात मा, सुन्दर, सानो बिरालोहरु एक प्रकारको यो विशेषता, तर अन्य धेरै गाह्रो को प्रभावशाली आकार देख।
यसको नाम भए तापनि यो predator यी तेंदुआ संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। Clouded चितुवा मुर्कुट्टा 60-100 सेमी को एक लम्बाइ छ, को पुच्छर माथि 90 सेमी, 20 30 किलो वजन हुन सक्छ। Predator खुला र हार्ड calluses उसलाई सजिलै रूखहरू चढ्नु अनुमति एक आश्चर्यजनक छोटो र बाक्लो खुट्टा छ। चितुवा पनि आफ्नो saber-दाँत कल गर्ने अधिकार दिन्छ जो ठूलो नंग्रा, छ।
ovals, rosettes र सर्कल को रूप मा जटिल ढाँचासँग, पहेंलो खैरो वा गाढा खैरो को बाक्लो कोट यो clouded चितुवा छ भन्ने निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले शाखा मा र आफ्नो सिकार लागि बाहिर हेर्न त्यहाँ बाट उत्कृष्ट चढाई भएकोले, एक rarity - फोटो जसमा रूख मा पशु चित्रण गरिएको छ। यो रकम तेंदुआ लामो पुच्छर कायम गर्न मद्दत गर्छ।
मातृभूमि clouded चितुवा दक्षिण एशिया छलफल गर्न सकिन्छ।
यो predator सुमात्रा, सिक्किम, कलीमान्टन मा, दक्षिणी चीन, नेपाल मा पाइन्छ।
Clouded चितुवा ट्रपिकल जंगल, नजिकै swamps र shrubs को thickets को impenetrable thickets inhabits।
चरा, porcupines, बाख्रा, सुँगुर, बाँदर, जवान भैंसी, मृग - एक मा सबै शिकार रुचि जंगली बिरालो।
चितुवा जमीन देखि र शाखा देखि दुवै आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई केही अवस्थामा यो दिनमा शिकार हुन सक्छ हुनत, nocturnal predator मुख्य रूप हो।
एक महिला एक पाँच शावक जन्म दिन सक्छ। Gestation तीन महिना रहन्छ।
जन्म एक बिल्ली को बच्चा बारेमा 250 G Toddlers पूर्ण जन्म छन् असहाय र अन्धो आँखा मात्र पछि 10 दिन खोलिएका छन् वजन, एक खोक्रो रूख मा एक महिला दिनुहुन्छ, तिनीहरू धेरै बिस्तारै बढ्न।
सुरुमा बिरालोको बच्चाहरुको एक खैरो वा पहेंलो फर ढाकिएको, र मात्र आधा वर्ष एक वयस्क चितुवा रूपमा पहिलो specks देखा पर्न।
पाँच महिनाको लागि तिनीहरूले आमाको दूध खान्छन्, तर पहिले नै तीन महिना संग, र वयस्क खाना खान सक्छन्।
बिरालोको बच्चाहरुको त्यसपछि तिनीहरूले पूर्ण आमा बिना गर्न सक्छन्, जस्तै प्रारम्भिक9महिना रूपमा स्वतन्त्रता पाउन। सामग्री प्रजनन तेंदुआ मामलामा लेट गर्मी सम्म प्रारम्भिक वसन्त देखि हुन्छ। Clouded चितुवा 17 वर्ष बसोबास, तर यो सामग्री सर्तहरू छ। जंगली जीवन प्रत्याशा अज्ञात छ। समृद्धि एक्लै बस्न, मात्र अपवाद को प्रजनन सिजन छ।
Clouded तेंदुआ धेरै सतर्क र संवेदनशील, मानिसहरूलाई जोगिन प्रयास हो, त्यसैले यसलाई उष्ण कटिबन्धीय तिनीहरूलाई देख्न गाह्रो छ। को भेट्यो कोट रंग गर्न, तिनीहरूले पूर्ण छद्मवेषी छन् कारण, हाँगाहरू बाँकी, सूर्य मा basking जहाँ रूखहरू, समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ। शारीरिक तेंदुआ बिस्तारै सिकार सम्म creeping र लामो जम्प गर्न, तिनीहरूलाई मनमनै सार्न अनुमति दिने, धेरै लचिलो छन्। तिनीहरूले धेरै छिटो चलाउन, त्यसैले सिकार वस्तुतः सतावट टाढा प्राप्त गर्न कुनै मौका छ।
यो बोट कोका के हो? कोका झाडी जहाँ विवरण बढ्छ
राजसी predator: चरा Condor
Salvia divinorum: नोक्सानी खेती मा प्रतिबन्ध
क्यान्सर एकान्तवासी - र अपरिचित बीच आफ्नै बीचमा पराई
बधाई आधिकारिक संस्कृति कामदार र धेरै
सबैभन्दा रोचक रूसी धारावाहिक के हुन्? रूसी गीतिनाटकहरू र प्रेम बारेमा धारावाहिक। नयाँ रूसी टिभी श्रृंखला
कसरी अधिकतम फाइदा उठाउन र स्वाद एक साधारण चयन गर्न?
छाला को कोलैजेन फाइबर
अडियो फाइल कनवर्टर: जीवनको संगीत!
स्टुको के हो? पचास र प्लास्टर - के फरक छ?
खोल-तुलिप्स - बाथरूम लागि स्टाइलिश समाधान